'प्राविधिक रेखदेख नहुँदा पुल भाँचियो’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
'प्राविधिक रेखदेख नहुँदा पुल भाँचियो’
वैशाख ३, २०७६ माधव अर्याल
पाल्पा — गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका–३, वडागाउँ र ७ को वामीटक्सार जोड्ने निर्माणाधीन पक्की पुल सरकारी प्राविधिकको रेखदेखबिना काम गरिँदा भाँच्चिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् । नयाँ डिजाइन भएकाले निर्माण व्यवसायीले पनि राम्रोसँग बुझिसकेका थिएनन् भने कामदार आफैं सिक्दै थिए ।
बडीघाट खोलाको फेदीमा बन्दै गरेको पक्की पुल आइतबार दिउँसो ढलान गरिरहेका बेला भाँचिएको थियो । ५८ मिटर लम्बाइको पुल बीचमा भाँचिँदा पाँच जना घाइते भएका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय सडक पुल कार्यक्रम (एलआरबीटी) अन्तर्गत ठेक्का भएको पुल हो । यस प्रकारका पुल नेपालमै अहिलेसम्म पाँचवटा माक्रै बन्ने त्रममा छन् । खोला वा नदीको वारि र पारि एबुटमेन्ट हुन्छ । बीचमा ५५–६० मिटरसम्म पनि पायर (पिलर) राखिँदैन । खर्च कम गर्ने हिसाबले यस्ता पुल डिजाइन भएका छन् ।
स्विस सरकारको सहयोग रहेको यस पुलको गुल्मीको तम्घासमा कार्यालय रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले रेखदेख गर्छ । यही पुलका लागि दुई जना प्राविधिक स्विस सरकारले पनि खटाएको छ । तर, रेखदेख र प्राविधिक रूपमा भने कमजोरी नै देखिने प्राविधिकहरू बताउँछन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विनोद चौधरीले दुई जना प्राविधिक फिल्डमै खटिएका थिए ।
सटरिङमा भएको कमजोरीले गर्दा टेका धसिएर पुल भाँच्चिएको उनले बताए । ‘म पनि स्थलगत रूपमा हेर्न गएको छैन,’ उनले भने, ‘फोटो हेर्दा सटरिङ र टेकाहरूमा कमजोरी देखिन्छ ।’ उनले सीमित कर्मचारीका कारण सरकारी प्राविधिक नियमित खटाउन नसकेको बताए । यो पुल प्रि–स्ट्रेस बक्स ग्रिडर प्रविधिमा निर्माण भएको छ ।
पहिले बन्ने पुलमा जस्तै टेका दिँदा यसले थेग्न सक्दैन । वर्किङ स्ट्रेसजस्तो नभई अहिलेको बक्स हुने भएकाले पनि मसला बढी जान्छ । इन्जिनियरहरूका अनुसार भार बढी हुने भएकाले पनि यसलाई पहिला नै अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । यसको ढलान सेट हुन पनि कम्तीमा २८ दिन लाग्छ । त्यसपछि बीचमा राखिएका प्वालबाट तार (वायर) लगेर यसलाई सपोर्ट गरिन्छ । त्यसपछि मात्र बलियो हुन्छ ।
यस पुलको डिजाइन बीचमै परिवर्तन गरिएको थियो । २७ असार ०७३ मा पुल निर्माण गर्न ५ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो, जसअनुसार ०७५ असार मसान्तमा सक्नुपर्थ्यो । खोलाबाट होचो भएकाले बीचमै डिजाइन परिवर्तन गरियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख चौधरीका अनुसार अहिले म्याद थप र भेरिएसनको प्रक्रियामा छ । पुल भत्किएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको उनले बताए ।
मुसीकोट नगरपालिका मात्र नभएर बाग्लुङ, पोखरासम्म आउजाउ सहज बनाउने पुल भाँचिँदा विकासमै धक्का लागेको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रवक्ता प्रकाश काफ्लेले बताए । भाँचिएको पुल सिंगल लेनको मोटरेबल पुल हो । शुक्रबार सटरिङ सकेपछि शनिबार ४० प्रतिशत ढलानको काम सकिएको थियो । पुनः आइतबार ३५ प्रतिशत थप गरी ७५ प्रतिशत काम सकिएको थियो । ढलान गर्न बाँकी २५ प्रतिशत रहँदा अचानक पुल बीच भागबाट भाँचियो ।
पुल नजिकै घर भएका प्रेम शाक्यले भने, ‘सबै आआफ्नै धुनमा काम गरिरहेका थिए । माथि मसला हाल्ने काम भइरहेको थियो । अचानक पुल भाँचियो ।’ केही दिनअघिको खोलाको पानी बढेका बेला सामान्य टेकालाई असर गरेको थियो । ‘तल्लो भेगमा हेर्न नगएकाले पनि समयमा थाहा हुन सकेन,’ शाक्यले भने ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०७:३४
सुटुक्क साटियो महँगो मेसिन
वैशाख ३, २०७६ भूषण यादव
वीरगन्ज — नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा रहेको किलिया मेसिन गुपचुप साटिएको खुलासा भएको छ । करिब २ वर्षअगाडि अस्पतालले झन्डै २२ लाख रुपैयाँ मूल्यको मेगलुमी ८०० मोडलको किलिया मेसिन खरिद गरेको थियो ।
नारायणी अस्पतालमा २२ लाख पर्ने मेसिन साटेर ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको जडान ।
थाइराइड, क्यान्सर, बाँझोपनलगायत विभिन्न हार्मोन परीक्षण गर्ने किलिया मेसिन करिब २५ दिन अगाडि साटिएको प्रयोगशालाका कर्मचारीले दाबी गरेका छन् । महँगो मेसिन साटेर करिब ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्ने चीनमा बनेको जिसेन सीआईए ६०० किलिया एनालाइजर प्रयोगशालामा राखिएको छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार पुरानो किलिया मेसिन सप्लायर्सले काठमाडौंको एक ल्याबमा बिक्री गरिसकेका छन् । सप्लायर्स, ल्याब इन्चार्ज र मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टले मिलेमतोमा मेसिन साटेर बिक्री गरिएको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ ।
वीरगन्जको बिर्तास्थित सिटी सर्जिकलले पुरानो र नयाँ किलिया मेसिन सप्लाई गरेको हो । सप्लायर्स र प्रयोगशालाका कर्मचारीले किलिया मेसिन साटिएको स्विकारेका छन् । तर,नारायणी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. एनामुल हकले बिग्रिएको किलिया मेसिन मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरेका छन् । ‘अहिले प्रयोगशालामा रहेको किलिया मेसिन पुरानै हो, साटिएको छैन,’ मेसु डा. हकले भने, ‘त्यही मेसिन बनाएर चलाइरहेका छौं ।’ मेसिन सप्लाई गर्ने सप्लायर्सले नै मर्मत गरेको उनले बताए ।
अस्पतालमा दुई वर्ष अगाडि किलिया मेसिन सप्लाई गरेका सिटी सर्जिकलका सञ्चालक दीपक अग्रवालले पुरानो मेसिन बिग्रिएपछि नयाँ हालिएको बताएका छन् । कान्तिपुरसँग फोनमा उनले भने, ‘मेसिन बिग्रेपछि रिप्लेस गरेका हौं, नयाँ मेसिन पनि राम्रो छ ।’ अग्रवालले नयाँ मेसिन पनि पुरानै कम्पनीको रहेको दाबी गरे ।
अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले सीसीटीभीको भिडियो अध्ययन गरे मेसिन साटिएको प्रमाण देखिने बताउँछन् । गत पुस अन्तिम साता पुरानो किलिया मेसिन बिग्रिएको थियो । मेसिन बिग्रिँदा दुई महिनासम्म सेवा ठप्प थियो । कर्मचारीका अनुसार सातौँ तहको ल्याब टेक्नोलोजिस्टले चलाउनुपर्ने किलिया मेसिन पाँचौँ तहको ल्याब टेक्निसियनले चलाएपछि बिग्रिएको हो ।
नेपाल सरकारको सातौँ तहका कर्मचारी हिराबाबु पाण्डे अस्पतालको प्रयोगशालामा विगत साढे चार वर्षदेखि कार्यरत रहे पनि करिब ९ महिना अगाडि ल्याब टेक्निसियन पदमा नियुक्त भएका पाँचौँ तहका सचिन्द्र यादव प्रयोगशाला प्रमुख बनाइएका छन् । उक्त पदमा दरबन्दी नहुँदा पनि निमित्त मेसु डा. हकले दैनिक ज्यालादारीमा बिनाप्रतिस्पर्धा यादवलाई नियुक्त गरी प्रयोगशालाको प्रमुख बनाएका हुन् । प्रयोगशालाका एक प्राविधिकले भने, ‘तजबिजमा पाएको पदले मेसिन चलाउने ज्ञान दिँदैन ।’
अस्पतालका मेसु डा. हकले किलिया मेसिन विज्ञले नै चलाउँदै आएको दाबी गरेका छन् । पाँचौँ तहका कर्मचारीले थाइराइड परीक्षण गरेको प्रमाण सुरक्षित रहेको बताएपछि मेसुले यसबारे छानबिन गर्ने आश्वासन दिए । सस्तो किलिया मेसिन प्रयोग गर्दा रोगको परीक्षणमा विश्वसनीयता नहुने प्रयोगशालाका टेक्नेसियनहरूले गुनासो गरेका छन् ।
‘नयाँ किलिया मेसिनमा परीक्षण गर्दा बढी केमिकल्स प्रयोग भइरहेको छ,’ एक ल्याब टेक्निसियनले भने, ‘पहिलेको मेसिनमा एउटा थाइराइड टेस्ट गर्दा दुई सय ५० रुपैयाँको केमिकल लाग्थ्यो, अहिलेको मेसिनमा ६ सय रुपैयाँसम्मको केमिकल लागिरहेको छ ।’ सरकारी अस्पतालको प्रयोगशालामा दैनिक २०/२५ वटा थाइराइड परीक्षण हुने गरेको छ ।
सूचना चुहाएको आशंकामा कारबाही
नारायणी अस्पतालभित्रको अनियमितताको सूचना चुहाएको आशंकामा निमित्त मेसु डा. हकले अस्पतालको फार्मेसी विभाग प्रमुख विजय यादवलाई कारबाही गरेको आरोप लागेको छ । १३ गुणा बढी मूल्यमा हाइड्रोजन परअक्साइड खरिद गरेको अनियमितता उजागर भएपछि यादवलाई कारबाही गरिएको हो ।
मिर्गौलाको डायलासिसमा प्रयोग हुने हाइड्रोजन परअक्साइड सप्लायर्सले ६५ रुपैयाँमा सकार गरेको थियो । तर, अस्पतालको स्टोर शाखाले ९ सय ४ रुपैयाँमा हाइड्रोजन परअक्साइड खरिद गरेको प्रमाण उजागर भएको छ । यसैगरी बजार मूल्य ८ सय रुपैयाँ रहेको सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल्स अस्पतालले १५ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेको छ । चैत २९ गते यादवको कामकाज सन्तोजनक नरहेको भन्दै करार सेवा थप गर्न नसकिने व्यहोराको पत्र काटिएको छ ।
यादव दुई वर्षदेखि फार्मेसी अधिकृतको पदमा कार्यरत थिए । मेसु डा. हकले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘अस्पताल फार्मेसी र अस्पतालप्रति तपाईंले गरेको काम सन्तोषजनक नभएको कारण माग भएबमोजिम म्याद थप गर्न नसकिने ब्यहोरा अनुरोध छ,’ उल्लेख छ । सात दिनभित्र जिम्मामा रहेको सम्पूर्ण नगद तथा जिन्सी सामान अस्पतालको स्टोर शाखालाई बुझबुझारथ गर्न पनि उनलाई भनिएको छ ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०७६ ०७:३३